Iyo Anatomy yeKuchengetedza uye Kushandisa | Martech Zone
Chitatu, September 19, 2012 Douglas Karr
Sevashambadziri, dzimwe nguva nyaya yedu hombe iri pamusoro pekutenga-sarudzo hump. Vanhu havazvizive, asi kune sainzi kune icho chiitiko. Nepo iyi infographic inotarisa pane maonero e kutenga sarudzo yevatengi, vatengesi vanofanirwa kutariswa pamabatiro avanogona kuita mukuita kuburikidza nekugadzira, kurongedza, kutumira mameseji uye kuita. Kucherekedza ngoro dzekutengesa dzakasiiwa uye kubhucha vashanyi - uye kuyedza misiyano dzakasiyana - kunogona kubvisa zvipingaidzo zvekupinda.
Chinyorwa chinyorwa: MoneySupermarket
Sep 24, 2012 na8:24 PM